China Hydraulic Guillotine ukucheba umatshini mveliso kunye nabenzi | YingYee
Umatshini weHydraulic Guillotine wokucheba
Emva kwenkonzo:Iinjineli Ziyafumaneka Kumatshini Wenkonzo Overseas
I-Voltage:380V / 3Phase / 50Hz Okanye ngokwesicelo sakho
Indlela yokusika:Ukusika i-hydraulic okanye ukusika kombane
Isantya sokwenza oku:8-10m / min
Ngesanti kubunzulu baphantsi Umatshini wokucheba
I-odolo encinci yamkelekile, yiba nentengiso elungileyo kwihlabathi liphela. * Yamkelwe ukuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi, isakhiwo sesakhelo esenziwe ngentsimbi esomeleleyo ngokwaneleyo kunye nokuqina. * Umatshini uxhotyiswe ngegeji yokubuyisa amandla kwi-whicn, uhlengahlengiso oluchanekileyo lwendlela, indlela yokususa iblade, isixhobo sokukhanya se-ashadw esenza i-operatikon yokusika, isinxibelelanisi, isithintelo esibukhali nesithembekileyo sokhuseleko. * Inokuxhotyiswa ngenkxaso yokuhambisa. * Isakhelo sonke esine-welding frame esinamandla apheleleyo kunye nokuqina. * Uthutho oluphezulu ngamanzi. * Isixhobo seHydraulic esinebhari yokhuseleko ethembekileyo. * Rapid ukusika uhlengahlengiso stroke iyamkelwa, isakhelo ukusika zilungiswe ukuqinisekisa priductionukwanda kokusebenza kakuhle xa usika iphepha elifutshane.
* Isikhululo sokulinganisa esingasemva sisebenzisa umlinganiso oqhutywa ziimoto kunye nohlengahlengiso olululo lwesandla. * Ukucanda isixhobo sokubala. * Isixhobo somgca wokukhanya ke kulula ukuba uzobe umgca wokusika
3. Ubuninzi bokusika ububanzi: 900-1200mm 4. Isantya sokusika: 8‐10m / min 5. Amandla aphambili: 30Kw (20mm) 20Kw (18mm) 15Kw (12mm) 6. Ukuhamba kwemoto: 5.5Kw 7. Ukusika ii-angles: 0.5‐3 ° 8. Ukuphakama kweqonga: 1030mm 9. Ubungakanani beworkshop: 100 ㎡ 10. I-Servo motor yokulawula ubude bezinto, ii-3 ii-PC ii-PLC zolawulo oluququzelelweyo Uhlobo lwezinto zombane:
1. Ukuchukumisa isikrini: Delta
2. IPlta Delta
3. Ukudluliswa: schneider 4. Ikhefu lesekethe Chint 5. Encoder: i-omron 6. Ezantsi schneider 7. Inventor Shihlin
1. Ixesha elifutshane lokuhambisa.
Ukukhangela efanelekileyo Ngesanti kubunzulu baphantsi Ukucheba MachineUmenzi kunye nomthengisi? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Yonke iUmatshini wokucheba i-Guillotineziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China Imvelaphi yeFektri yokuSebenza ngokuCoca umatshini. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iindidi zeMveliso: Umatshini wokucheba
Umatshini wokucheba i-Guillotine
Ngesanti kubunzulu baphantsi Ukucheba Machine
Plate Ukucheba Machine
Umatshini we-Swing Beam Shearing
Ridge cap iteyile roll bokwakha umatshini uyathengiswa
c purlin uyilo loyilo roll bokwakha umatshini
uhola wendlela iinkcukacha iinkcukacha roll bokwakha m ...
Umatshini wokujija we-Z28-250
Isatifikethi se-CE sombumba opholileyo owenziwe kabini ...
Roof Tile Metal Sheet Ndiyila Machine